solar street light Manufacturers - China solar street light Factory, Suppliers
100W 200W 300W yakanaka mhando yekunze solar mugwagwa mwenje unopenya kwazvo uye usingadhure
chinhu chakananga Rudzi Temperature (CCT) 5000K (Daylight) Input Voltage (V): DC 6V Lamp Luminous Efficiency (lm/w): 80 Warranty(Gore): 2-Year Ruvara Rendering Index(Ra): 80 Support Dimmer: HAPANA Mwenje mhinduro sevhisi: Kuvheneka uye dhizaini dhizaini Hupenyu (maawa): 50000 Nguva Yekushanda (maawa): 50000 Rudzi: solar led street light Model Number: HXT-LD-44300BP IP Rating: IP66 Power Source: solar Lamp Luminous Flux(lm): 4960 Chiedza Sou...
60W Solar Led Street Mwenje
1. BK dzakatevedzana kubva 20W kusvika 60W.
2.Kubatanidza dhizaini, isa solar panel, mwenje unotungamira, bhatiri uye smart controller zvese mubhokisi, pasina chero tambo.
3.Kuva nemaitiro ekuchengetedza simba nePIR motion sensor.
4.Zvaunofanirwa kuita kana wazvigamuchira ndezvekuzviisa padanda kana kumadziro, zviri nyore kutumira, kuisa uye kuchengetedza.
96 LED 50W simba rezuva chiedza chemugwagwa mwenje wekunze mwenje wekunze wakakwira lumen aluminium mwenje wemugwagwa
Mwenje wezuva remumugwagwa unofambiswa necrystalline silicon solar masero.Maintenance yemahara vharafu inodzorwa yakavharwa mabhatiri (colloidal mabhatiri) chengetedza magetsi emagetsi.Ultra inopenya marambi e LED anoshandiswa semwenje masosi uye anodzorwa neane hungwaru kuchaja uye anoburitsa ma controller kutsiva echinyakare mwenje wemumugwagwa weruzhinji magetsi.
Hapana tambo yekuisa, hapana AC magetsi uye hapana kubhadharisa magetsi;DC simba rekupa uye kutonga;Iyo utility modhi ine zvakanakira kugadzikana kwakanaka, hupenyu hurefu hwesevhisi, yakanyanya kupenya kupenya, nyore kuisa uye kugadzirisa, kuita kwekuchengetedza kwakanyanya, kuchengetedza simba, kuchengetedza kwezvakatipoteredza, hupfumi uye kuita.